အဖွတှေရှေိပမေယျ့ လကျခံရဲတဲ့သတ်တိတှေ မရှိခဲ့ဘူး … – Shinyoon
အဖွတှေရှေိပမေယျ့ လကျခံရဲတဲ့သတ်တိတှေ မရှိခဲ့ဘူး …
January 5, 2021 by Shin Yoon
လိမျနမှေနျးမသိတာမဟုတျပဲ လိမျနမှေနျးသိသိနဲ့ ပြျောပြျောကွီးအလိမျခံနတေဲ့ ဘဝတှတေကယျရှိပါတယျ ဘာကွောငျ့လဲမေးရငျ သူနဲ့အဝေးကွီးမှာ မနနေိုငျသေးလို့ဆိုတဲ့အဖွတှေပေဲ ရလာလိမျ့မယျ ဘယျလောကျဆိုးလိုကျတာတဲ့ ကံလဲ မဟုတျပဲ ဘယျလောကျနညျးလိုကျတဲ့ သတ်တိလဲ ။
မခဈြမှနျးသိသိနရေဲ့ အလိုကျသငျ့လေးဆကျဆံပေးနတောကို မအေးစကျသှားအောငျ ကွိုးစားပွီး နှေးထှေးအောငျ လုပျနရေတဲ့အဖွဈတှကေလဲ တကယျရှိပါတယျ .. ကိုယျတိတျဆိတျလိုကျရငျ အားလုံး ခွောကျကပျသှားလိမျ့မယျဆိုတဲ့စိတျနဲ့ မြှျောမနမှေနျးသိပမေယျ့ အခြိနျမှနျချေါဖွဈခဲ့တဲ့ ဖုနျးတှပေေါ့
သိပျခဈြလို့ဆိုတဲ့ အသိတဈခုကိုပဲ နှလုံးသားထဲမှာကော ဦးဏှောကျထဲမှာကော အသရေိုကျသှငျးထားလိုကျတာလေ သူမရှိတော့ရငျဆိုပွီး ယောငျလို့တောငျ မစဉျးစားခဲ့ဘူးတဲ့ လူအတှကျတော့ သူမခဈြတော့ပါလားဆိုပွီး အရှိကို အရှိအတိုငျး လကျခံဖိုး ဘယျလှယျကူပါ့မလဲ …
ကိုယျ့အနားမှာ မပြျောမှနျးလဲသိတယျ ဒါကိုပဲ တဈနတေ့ော့ပြျောလာမှာပါဆိုတဲ့အတှေးနဲ့ ဆှဲထားလကျတှကေို မလှတျခခြဲ့ကွသေးဘူး … အဲ့ဒီလူတှမှော အဖွတှေမေရှိခဲ့တာမဟုတျပဲ အရှိကို အရှိအတိုငျးလကျခံရဲတဲ့ သတ်တိတှမေရှိခဲ့ကွလို့ ဆကျပွီး ရူးမိုကျနကွေတာပါ …
လိမျနမှေနျးသိသိနဲ့လဲ ပြျောတယျ .. မနှေးထှေးမှနျးသိရဲ့နဲ့လဲ ပွုံးတယျ … တကယျဆို အဖွတှေသေိပွီးနပွေီး လကျခံရဲတဲ့သတ်တိလေးပဲ လိုတော့တာပါ … အဲ့ဒီအမှနျတရားကို လကျခံလိုကျမယျဆိုရငျ ကိုယျကိုယျတိုငျ လှတျလပျသှားလိမျ့မယျ ….
အဖြေတွေရှိပေမယ့် လက်ခံရဲတဲ့သတ္တိတွေ မရှိခဲ့ဘူး …
လိမ်နေမှန်းမသိတာမဟုတ်ပဲ လိမ်နေမှန်းသိသိနဲ့ ပျော်ပျော်ကြီးအလိမ်ခံနေတဲ့ ဘ၀တွေတကယ်ရှိပါတယ် ဘာကြောင့်လဲမေးရင် သူနဲ့အဝေးကြီးမှာ မနေနိုင်သေးလို့ဆိုတဲ့အဖြေတွေပဲ ရလာလိမ့်မယ် ဘယ်လောက်ဆိုးလိုက်တာတဲ့ ကံလဲ မဟုတ်ပဲ ဘယ်လောက်နည်းလိုက်တဲ့ သတ္တိလဲ ။
မချစ်မှန်းသိသိနေရဲ့ အလိုက်သင့်လေးဆက်ဆံပေးနေတာကို မအေးစက်သွားအောင် ကြိုးစားပြီး နွေးထွေးအောင် လုပ်နေရတဲ့အဖြစ်တွေကလဲ တကယ်ရှိပါတယ် .. ကိုယ်တိတ်ဆိတ်လိုက်ရင် အားလုံး ခြောက်ကပ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ မျှော်မနေမှန်းသိပေမယ့် အချိန်မှန်ခေါ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဖုန်းတွေပေါ့
သိပ်ချစ်လို့ဆိုတဲ့ အသိတစ်ခုကိုပဲ နှလုံးသားထဲမှာကော ဦးဏှောက်ထဲမှာကော အသေရိုက်သွင်းထားလိုက်တာလေ သူမရှိတော့ရင်ဆိုပြီး ယောင်လို့တောင် မစဉ်းစားခဲ့ဘူးတဲ့ လူအတွက်တော့ သူမချစ်တော့ပါလားဆိုပြီး အရှိကို အရှိအတိုင်း လက်ခံဖိုး ဘယ်လွယ်ကူပါ့မလဲ …
ကိုယ့်အနားမှာ မပျော်မှန်းလဲသိတယ် ဒါကိုပဲ တစ်နေ့တော့ပျော်လာမှာပါဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ဆွဲထားလက်တွေကို မလွတ်ချခဲ့ကြသေးဘူး … အဲ့ဒီလူတွေမှာ အဖြေတွေမရှိခဲ့တာမဟုတ်ပဲ အရှိကို အရှိအတိုင်းလက်ခံရဲတဲ့ သတ္တိတွေမရှိခဲ့ကြလို့ ဆက်ပြီး ရူးမိုက်နေကြတာပါ …
လိမ်နေမှန်းသိသိနဲ့လဲ ပျော်တယ် .. မနွေးထွေးမှန်းသိရဲ့နဲ့လဲ ပြုံးတယ် … တကယ်ဆို အဖြေတွေသိပြီးနေပြီး လက်ခံရဲတဲ့သတ္တိလေးပဲ လိုတော့တာပါ … အဲ့ဒီအမှန်တရားကို လက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် လွတ်လပ်သွားလိမ့်မယ် ….
သှေးမထှကျပမေယျ့လဲ ရငျထဲနာရတယျ ..
ငိုခငျြနတေဲ့အခါ ကောငျးကငျကို မော့ကွညျ့ပါ …